Weather in Bali in June ~ Journey-Assist - Fety tany Bali ny volana jona
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Toetr'andro sy Bali » Weather in Bali amin'ny volana Jona
Weather in Bali amin'ny volana Jona
Ny volana jona any Bali dia saika ny fara tampon'ny vanim-potoana ambony any Bali. Amin'ny alàlan'ny fitsipi-pifehezana rehetra dia tsara izay hitsidika an'i Bali. Misafidy fialan-tsasatra amoron-dranomasina, fitsangantsanganana mavitrika any an-tendrombohitra, mitsidika ny toerana ara-kolontsaina sy voajanahary, na ny mitroatra na manidina…. Amin'ity volana ity dia misy fepetra ilaina amin'izany rehetra izany. Azonao atao ny misafidy soa aman-tsara mandeha amin'ny bisikileta manodidina ny nosy tsy misy orana be.
Ny mari-pana amin'ny volana Jona dia mihena manodidina ny 31 ° C mandritra ny andro ary tsy milatsaka ambanin'ny 24 ° amin'ny alina. Ireo mari-pana tena mahasalama no ilaina hanina tsara.
Ny hafanana amin'ny rano sy ny fialantsasatra amoron-dranomasina amin'ny Jona
Ny rano amin'ny ranomasina amin'ny volana jona dia manana hafanana 27 °, izay mari-pahaizana roa ambanin'ny haavo antonony amin'ny mari-pana isan-taona, fa ampy ho an'ny milomano lava aina ao anaty rano. Ny rivotra tamin'ny volana Jolay dia milamina ary azo tanterahina, ny onja na aiza na aiza afa-tsy ny mason-tsoratry ny oniversite Bali dia azo antoka hilomano, tsy misy fika mihemotra, ka tsy misy manakana ny fialantsasatra amoron-dranomasina tsara.
Ny fanetren-tena any Bali amin'ny volana jona dia ambany. 60% izany. Io no iray amin'ireo taha ambany indrindra ao anatin'ny taona. Volana tsara hiakatra an-tendrombohitra, izay hahafinaritra anao ny panoro tsy rakotry ny rahona.
Varatra any Bali ny volana jona
Tsy fahita firy ny orana amin'ny volana jona. Tsy hita isa ny antontan'isa ary manondro andro 6 be rahona sy orana mety ho mandritra ny volana. Ary ny orana amin'izao andro 6 izao, raha manao izany izy ireo, amin'ny alina, ary maharitra ela ny adin'ny roa.
Surfing ao Bali tamin'ny Jona
Ny volana jona dia volana tsara mikoriana amin'ny Bali. Ao ny fepetra ilaina rehetra amin'ity fanatanjahantena ity. Mandeha tanteraka ihany koa ny asan'ny surf surf.
07.06.2020 / fanehoan-kevitra amin'ny Desserts sy ny zava-mamy ao Bali tsy misy